खुशी र स्वास्थ्यको लागी स्वभाव संग एकताबद्ध हुन कसरी? - Khabar Time
खुशी र स्वास्थ्यको लागी स्वभाव संग एकताबद्ध हुन कसरी?
तपाईं कसरी हो / हाम्रो उत्तम शरीर भवन? एक पटक तपाईंले मनन गर्नुहुनेछ। योग विज्ञान भन्छ कि शरीर पांच तत्वहरु संग बनाइन्छ। आकाश, वायु, आगो, पानी, पृथ्वी। शरीरको संरचना बुझ्न हामी अद्भुत शक्ति र महत्त्व पनि अनुमान गर्न सक्छौं।
यद्यपि, हामी सम्पूर्ण शरीर र हाम्रो शरीरको प्रक्रियाबाट अनजान छौं। दुःखको कुरा, हामी यी गुणहरू, विशेषताहरू, शरीरको बलको बारेमा थकित छौं। यही हो, जब हामी आफैसित छौं, हाम्रो शरीरको प्रक्रिया र क्षमताको बारेमा जान्न हामी भौतिक संसारमा पुग्छौँ।
स्मार्टफोन र जीवन
यो भनिएको छ कि एक स्मार्टफोनमा धेरै जालहरू छन्। तथापि, हामी त्यसको शंकास्पद अनुगमनको बारेमा ध्यान राख्दछौं। कल गर्न, भिडियोहरू / तस्बिरहरू लिनुहोस्, केहि अनुप्रयोगहरू चलाउन अरू केही गर्न नगर्नुहोस्। यसको मतलब, हामी स्मार्टफोन प्रयोग गर्दैनौं किनकि हामी मूल्य तिर्न द्वारा स्मार्टफोन किन्न सक्छौं। किनभने यो यसको उपयोगिता सख्त राखिएको छैन।
त्यसै गरी, हामी संरचना र विज्ञान, यसको शक्ति र शरीरको सुन्दरता थाहा छैन। तपाईं थाहा छैन कि कस्तो किसिमको शक्ति छ, तिम्रो शरीरको के हो। जब हाम्रा पुर्खाहरूले साबित गरेका थिए कि शरीरको महत्त्व र शक्ति प्रयोगबाट थियो। योग यो परिणाम हो।
योगले शरीरको संरचना र शरीरको बारेमा देखाउनुभएको छ। यदि यो बुझियो भने, यो स्पष्ट छ कि शरीरको बहुमूल्य रकम हो।
शरीर: मिट्टी को संयोजन
शरीर उत्तम छ। यो प्रकृतिको सुन्दर सृष्टि हो। र, यो मिट्टी देखि एक धूल को एक उन्नत रूप हो। केही सुन्दर तितलीहरू, फूल फूल, रसदार फलहरू माटोबाट बसाल्छन्। त्यसै गरी शरीर पनि माटोको संरचना हो।
माटोमा उडेको शरीर धूलको तल जान्छ। यदि हामी यस बारे जान्दछौं भने, यो पवित्र शरीर भित्र अहंकार, गूंगा, लोभ र रिस जस्तो लाग्दैन। तथापि, शरीरको संरचनाको कारण, हामी यी विकारहरू भण्डार गर्छौं र शरीरलाई अपमान गर्छौं। हामी यसलाई खराब बनाउँछौँ।
जस्तै वायुमण्डलीय संक्रमित हुन्छ, यसले धेरै समस्याहरू उत्पन्न गर्दछ, त्यसै गरी शरीर भित्रको खराब भावनाले पनि शरीर बिरामी र पुरानो बनाउँछ। हाम्रो अधिकांश रोगहरु हाम्रो शरीर भित्र फैलिएको छ, जो आधुनिक जीवन शैली मा फैलिएको छ।
शरीरमा अत्यधिक शक्ति छ। यो सुन्दर सुन्दरता हो। तथापि, हामी कहिल्यै शरीरमा प्रवेश गर्दैनौं। हामी बाह्य निर्दोषको अनुहारमा हाम्रो शरीरलाई बेवास्ता गर्छौं। हामी यो खान चाहँदैनौं। हामी अनौपचारिक जीवनशैलीमा आनन्दित छौं। यसरी, हामी आफ्नै शरीरलाई हल्लाउँछौं। हामी अपमान गर्छौं परिणाम के हो?
धेरै रोगहरू, दुखाइ, दुखाइ शरीरमा थपिएका छन्।
गौतम बुद्ध एक एनसी हो, “एक रोगी निकायको साथ रहन जीवन होइन, यो केवल जीवनको पीडा हो।”
योगले आफूलाई आत्महत्या गर्न बिरामीको शरीरबाट आत्महत्या गर्न भन्नुभयो। त्यसकारण, रोगी हुनु वा जीवनमा पीडित आफैंमा सजाय हो। अत्याचार अत्याचारको लागि हिट गर्न को आवश्यकता छैन। हामी पनि हाम्रो मायालु हृदयमा पीडादायी जीवनबाट पीडित छौं।
त्यसोभए, यस्तो पीडा, शंकाबाट पीडित छ, हामी प्रकृतिसँग एकताबद्ध हुनुपर्छ, अविवाहित, प्रजनन, शान्त जीवनमा विजयी हुन। मिट्टी एकता हुनुपर्छ। अधिक हामी प्रकृति बाट टाढा छौँ, हामी दुखाइ पीडा पर्छ।
प्रकृति संग सदन: जीवन सुखी र स्वस्थ छ
माटो खेल्नु, जीवनशैली आचरण, स्वभाव द्वारा दिइएको प्रकृति, भोजन। हाम्रो शरीरको सन्तुलन र स्वास्थ्यको संतुलन गर्न, यसले विभिन्न फल, अन्न आदि उत्पादन गर्दछ। तथापि, हामी प्रकृतिको विरुद्धमा छौं।
प्रकृतिले हामीलाई महसुस गर्दछ कि हामी बिहान र साँझमा फलफान उत्पादन गर्दछौं। हामी खाना क्रान्ल, पकाउने, पकाउने, र खाना खानेको लागि आवश्यक खाना खान कोसिस गर्छौं। हामी Banjalangal जलाएर घरमा घरको एक शानदार फूल बनाउछौं। हामी प्रकृतिबाट टाढा जान्छौं, हामी रोगको झुकावमा जान्छौ।
गोपी को ट्रेलर देखेर कविता लेख्नुहोस्, पुरस्कार जित्नुहोस्